နအဖ ဝါဒဖြန့် အွန်လိုင်း သတင်းစာ. ကြေးမုံအွန်လုံး အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှ ခွပ်ဒေါင်းအလံ.. ~ ဒီမိုဝေယံ
နအဖ ဝါဒဖြန့် အွန်လိုင်း သတင်းစာ. ကြေးမုံအွန်လုံး အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှ ခွပ်ဒေါင်းအလံ..
စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ကြေးမုံ ခေါ်(Mirror) မိလ္လာသတင်းစာ အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှ ခွပ်ဒေါင်းအလံနဲ့ လူထုတိုက်ပွဲ ကော်မတီရဲ့ ကြေငြာချက်ပါ.. ဖော်ပြပါရှိပါတယ်..။ နအဖလက်ကိုင်တုတ်များမှ www.kyaymon.info မှ ခွပ်ဒေါင်းပုံအား ပြန်ဖျက်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း ခွပ်ဒေါင်းပုံနှင့် "နအဖ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အလိုမရှိ" စာတမ်းမှာ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစာမျက်နှာပေါ်မှ စာများကတော့ ..
(နအဖရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက် ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် နအဖ၏ ၀ါဒဖြန့်ချီရေး အင်တာနက် စာမျက်နှာများအား ၄င်းတို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့တွင် ကြည့်ရှူ မရစေရန်အတွက် တားမြစ်ပိတ်ပင် ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ပါသည်။
နအဖ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်သည့်အနေဖြင့် နအဖ၏ ၀ါဒဖြန့်ချီရေး အင်တာနက်စာမျက်နှာများအား ပိတ်ဆို့ပြောင်းလိုက်ပြီး ခွပ်ဒေါင်းအလံတင်ကာ "နအဖ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား အလိုမရှိ" စာသားများ ထည့်သွင်းလိုက်ပါသည်။
နအဖရဲ့ ရွေးချယ်ထားပြီးသားသူများနဲ့ ကောက်ကျစ်စွာ ကျင်းပတဲ့ စီစဉ်ကျင်းပသည့် နအဖ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ပြည်သူလူထုမှ သပိတ်မှောက်ရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။)
ဤ အွန်လိုင်းမှနေ၍ နအဖရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး သပိတ်မှောက်လုပ်ဆောင်မှုအား (လူထုတိုက်ပွဲကော်မတီ ၂၀၁၀ - People Action Committee) နှင့် မျိုးချစ်ပြည်သူများမှ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
နအဖ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့် ကျင်သပိတ်မှောက်သည့်အနေဖြင့် ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်ခံရသည့် ပထမဦးဆုံး နအဖ၏ ၀ါဒဖြန့်ချီရေး အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ http://yadanarpon.com.mn ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကြေးမုံ မှာ www.kyaymon.info ဒုတိယ ဖြစ်ပါသည်။
အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ကျနော်တို့ ဆန်ကျင်သပိတ်မှောက်ကြမယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ အခွင့်အရေးတွေနဲ့တိုးတက်နဲ့ နိင်ငံတော်သစ်ကို တည်ဆောက်ကြမယ်။ လူမှုအထွေထွေ ရင်ဆိုင် နေရတဲ့ ကျနော်တို့ ဘ၀တွေကို တော်လှန်ပြောင်းလဲပြစ်ပြီး မျော်လင့်ချက်ရှိတဲ့ ဘ၀သစ်တွေကို တည်ဆောက်မယ်။ အမှောင်ခေတ်ကိုခွင်းပြီး အလင်းခေတ်ကို အသစ်ကို တည်ဆောက်ကြမယ်။ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ဆန်ကျင်တဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အထွေထွေသပိတ်ကြီးကို ကိုယ့် ပြည်နယ်အသီးသီးမှာ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့က စတင်ပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ပန်ကြားပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့က အထွေထွေသပိတ်ကြီး အစီအစဉ်ကိုတော့ အောက်ဖေါ်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း လုပ် ဆောင်သွာမယ်။ မပျက်မကွက် လာခဲ့ကြပါဖို့ ပန်ကြားလိုပါတယ်။
(လူထုတိုက်ပွဲကော်မတီ ၂၀၁၀ - People Action Committee)”